पार्टीलाई क्रिश्चियनकरण गर्ने राष्ट्रघाती कदमका विरुद्ध पार्टीमा म एक्लैले लड्न तयार छु : भीम रावल-Nepali online news portal
पार्टीलाई क्रिश्चियनकरण गर्ने राष्ट्रघाती कदमका विरुद्ध पार्टीमा म एक्लैले लड्न तयार छु : भीम रावल
मुलुकका समस्याबारे देशका बुद्धिजीवीले नबोल्ने हो भने देश बचाउन सकिन्न अब। चुनाव भयो, पार्टी एकता पनि भयो अब त देशमा केही होला भन्ने आश गरेको थिएँ। तर, नागरिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय हीत जस्ता संवेदनशील विषयमा पनि लड्नै पर्ने स्थिति आयो। वि.सं. २०४८ सालपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालामा त्यस्तै परिस्थिति निम्तियो। ‘नेशनल इन्ट्रेस’ कहाँ खतम हुन्छ भनेर सधैँ चिन्ता गर्नु पर्थ्यो, र हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। संविधानपछि दुईतिहाइ बहुमत हाम्रो पार्टीले पाएपछि आफ्नो काम गरौँला भनेको त महिना—महिनामा हस्तक्षप गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने सरकारका काम कति छन् कति। तर, गएर ढुक्कले चार दिन सोल्टी होटलमा बस्नु भयो। अरु नबोल्लान्, तर मत देशका बारेमा नबोली रहन सक्दिन।
यो धर्मसँग सम्बन्धित कार्यक्रम या एउटा चर्चको सम्मेलनमा सरकार सहआयोजक भएको विषय मात्रै होइन। सम्मेलन आयोजक या संगठनको पृष्ठभूमि के हो? उसले कस्ता गतिविधि गर्दै आएको छ? र त्यो गतिविधिको प्रभाव के पर्छ? यी सबैलाई समग्रतामा हेर्नुपर्छ। सन म्योङ मुनले स्थापना गरेको युनिफिकेशन चर्च। त्योसँग जोडिएको अर्को संस्था युनिभर्सल पीस फेडेरेशन अनि त्यसले नेपालमा आयोजना गरेको समिट? मुन आफैँ जासुसीको आरोपमा कोरियामा पाँच वर्ष थुनामा परे।
चर्चलाई विस्तार गर्ने कोसिस गरे। र, उनले भने, ‘म जिसस क्राइस्टका बाँकी काम गर्न पूरा गर्न पठाइएको व्यक्ति हुँ।’ सन् १९७१ मा अमेरिका पुगे। र, त्यहाँमा विभिन्न आफ्ना अनुयायीहरु उत्पादन गरे। धेरै ठूलो रकम संकलन गरे। त्यसपछि त्यही कर छलेको आरोपमा उनी १८ महिना जेल परे। १५ हजार अमेरिकी डलर जरिवाना तिरे र जेलमुक्त भए। बेलायतमा धर्मान्तर गरेको भन्दै उनको भ्रमणमा रोक लगाइयो। जापानमा युवा पिँढीमा धर्मबारे अन्धविश्वास फैलाएका उनको आगमनमा प्रतिबन्ध लगायो। यस्तो पृष्ठभूमि भएको संगठनले आयोजना गरेको सम्मेलनमा सरकार त्यो पनि उच्चतम तहमा, आफैँ संलग्न हुनु लाजमर्दो होइन?
त्यसमाथि पनि गैरसरकारी संस्था, परिवार दल अनि एकनाथ ढकालले सक्रियतापूर्वक आफ्ना गतिविधि गरिरहेको अवस्थामा औपचारिक रुपमा राज्यकै कार्यक्रम जस्तोगरी विमानस्थलमा मन्त्रीहरु गएर सम्मेलनका विदेशी प्रतिनिधिहरुलाई स्वागत गर्ने कुरा झनै अर्मयादित हो। नेपालबाट यतिका धेरै प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु यस्ताखाले अनगिन्ति कार्यक्रमका लागि बाहिर गइरहन्छन्। उनीहरुलाई कुन देशका प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरु विमानस्थलमा आएर स्वागत गरे? त्यो देखाउनु पर्छ सरकारले?
कम्युनिस्टलार्इ सैतान भन्ने मुनकाे पूजा किन ?
८७ वर्षको उमेरमा पुग्दा उनले निजी विमान चडेर एक सय २० देशको भ्रमण गरेका थिए मुनले। र, कयौँ ठाउँमा उनको प्रवेश निषेध गरिएको थियो। यस्तो पृष्ठभूमिका व्यक्तिले खडा गरेको संस्थालाई आधार मान्दै नेपालमा सम्मेलन आयोजना गर्न पाइन्छ? त्यसमाथि कम्युनिष्ट सरकार र त्यसका नेताहरु आफैँ अघि सरेर निम्तोपत्रमा हस्ताक्षर गरेर बाँड्न मिल्छ? यो कामले सरकारको र राष्ट्रको मर्यादा, कम्युनिष्ट पार्टीको वैचारिक मान्यता अनि कुटनीतिक मर्यादामाथि आघात पुगेको छ।
पार्टी र सरकार नेतृत्वले कुन आधारमा यस्तो निर्णय लियो? यो त उहाँहरुलाई नै थाहा होला। पार्टीको बैठक बोलाएको भए अनि त्यहाँ छलफल भएको भए र उहाँले पनि आफ्नो धारणा राखेको भए थाहा हुन्थ्यो। त्यो हुँदैन। तर, यसभन्दा अघि पनि एकनाथ ढकाल र परिवार दलको सम्बन्धमा या उहाँलाई मन्त्री बनाउने बेला मैले प्रश्न उठाएको थिएँ। किन उहाँलाई त्यति धेरै महत्व दिएको? हाम्रा पार्टीमा लामो समय योगदान पुर्याएकालाई छोडेर उहाँलाई किन च्यापेको? मैले प्रश्न गरेको थिएँ। तर, त्यतिबेला सबैलाई समेटेर जाने अवस्था भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले मलाई थम्थमाउनु भयो।
नेपालका सयौँ किशोरकिशोरीलाई जापान, कोरिया पठाएर सडकहरुमा माग्न विवश बनाइएको छ। सञ्चारमाध्यमले पनि यी विषयमा जानकारी गराएका छन्। नेपालको बद्नाम भएको छ। यो विषयको समग्रतामा छानबिन हुनुपर्छ। साथै यो कार्यक्रमका लागि यति ठूलो रकम खर्च गरिएको छ। श्रोत के हो र कहाँबाट आयो? हाम्रा जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणका लागि खाने, बस्ने, हवाइजहाजको टिकट दिने र ज्याकेट दिने प्रलोभन देखाइयो। यो पैसा कहाँबाट आयो? के त्यस्तो के स्थिति आइपर्यो जसले गर्दा यस्तो विवादास्पद सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री आफैँ लाग्नु पर्ने? मेरो सरल प्रश्न हो यो। यस्तो कम्युनिष्ट पार्टीले देशलाई डेलिभर गर्छ त?
यी सबै गतिविधिमाथि छानबिन गर्नुपर्छ। मन्त्रालयको सानोतिनो रकममा त खोजी गर्नुपर्छ। एकनाथ ढकालले यत्रो पैसा ल्याएर खर्च गर्ने? अर्थात् गृहमन्त्रालयले एशिया प्यासिफिक समिटका नेपाल आयोजक र उसका सम्पूर्ण गतिविधिलाई छिटोभन्दा छिटो अनुसन्धानको घेरामा ल्याउनु पर्छ। त्यो नेपाली जनताको जान्न पाउने हक हो।
एकनाथकाे शक्तिकाे स्राेत
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विशाल जनमतका साथ यत्रो वर्षपछि सत्तामा आएको छ। जनअपेक्षा ठूलो छ। यो पार्टीका लागि सुनौलो अवसर पनि हो। यस्तो बेला हाम्रा प्रधानमन्त्री र पार्टीका नेताहरुलाई घिसार्ने एकनाथ ढकालको हैसियत र शक्तिको श्रोत के हो? त्यसको छिटोभन्दा छिटो छानबिन हुनुपर्छ। यो पनि हेर्नु पर्ने भएको छ। हाम्रो पार्टीमा अहिलेसम्म जननिर्वाचितहरु एकै ठाउँमा भेला हुने मौका पाएका छैनन्। जनप्रतिनिधिले आफ्ना कुरा राख्न पाएकै छैनन्। तर तिनै जनप्रतिनिधिलाई दम्पतीसहित आएर आर्शिवाद लिनुपर्छ भनेर उर्दी जारी गर्न मिल्छ? यो त हाम्रा जनप्रतिनिधिका लागि पनि अपमानको कुरा पनि हो।
पार्टी एकताका बेला हाम्रो जुन अपेक्षा थियो त्यो अनुसार काम हुन सकेन। त्यो हुनै सकेन। त्यसले देशलाई पनि एउटा गन्तव्यमा लैजाने हाम्रो अपेक्षा थियो। जनताका अपेक्षा छिट्टै पूरा होला भन्ने लागेको थियो। त्यसमा नि–सन्देह नै धेरै ढिलो भइसकेको छ। हाम्रा प्रदेश कमिटीले निकै मेहनत गरेर सचिवालयलाई प्रतिवेदन दिए। तर, त्यसबारे अहिलेसम्म निर्णय हुन सकेन। सचिवालयले मात्रै टुंग्याएर पनि हुन्न। खै त स्थायी समितिको बैठक? अनि त्यसको अनुमोदन?
पार्टी विघटनकाे अवस्था
वास्तवमा पहिलो पटक पार्टी विघटनको अवस्था मैले पहिलो पटक देखिरहेको छु। यसले पार्टीलाई ठुलै क्षति पुर्याउने छ। त्यसको असर सरकारलाई मात्रै देशलाई नै पर्न जान्छ। शीर्ष नेताहरुले यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। एशिया प्रशान्त शिखर सम्मेलनका नाममा सरकारको समय खेर गयो। यो दुःखद् हो। अर्को कुनै सम्मेलनमा यस्तै होला अनि कसरी बन्छ देश? शिखरमा समय बिताउनुभन्दा पार्टी एकतामा ध्यान दिएको भए कति राम्रो सन्देश जाने थियो जनमानसमा। उनीहरु कति खुशी हुन्थे?
छिमेकी मुलुककाे सम्वन्ध
शान्ति प्रकियाकाे अवस्था